Ike imeghe gị Ndi an-kpọ Email nchekwa. Njikwa abụghị faịlụ na-anọghị n'ịntanetị.
Home ngwaahịa DataNumen Exchange Recovery Njikwa abụghị faịlụ na-anọghị n'ịntanetị
Zuru ezu Ozi banyere "The faịlụ abụghị anọghị n'ịntanetị nchekwa nchekwa" Njehie
Mgbe starna Microsoft Outlook, ị nweta ndị na-esonụ njehie ozi:
Enweghi ike imeghe nchekwa email gị. Faịlụ xxxx.ost abụghị faịlụ folda na-anọghị n'ịntanetị.
ebe 'xxxx.ost'bụ aha nke folda na-anọghị n'ịntanetị (.ost) faịlụ kere site na Outlook mgbe á »na - ará» working á »rá» Exchange na Exchange mailbox offline. Nwere ike ọ gaghị abụ maara nke ọma na faịlị dịka e kere ya n’uche.
E nwere ihe abụọ kpatara nke a ga - akpata njehie a, dị ka ndị a:
The OST faịlụ ahụ mebiri emebi ma ọ bụ merụọ, Microsoft Outlook enweghị ike ịmata ya, ya mere Outlook ga-akọ njehie a.
The OST faịlụ metụtara na igbe akwụkwọ ozi dị na ihe nkesa Exchange. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla kpatara, Microsoft Outlook enweghị ike ịnweta igbe ozi igbe metụtara ma ọ bụ stariji mekọrịta igbe akwụkwọ ozi na folda na-anọghị n'ịntanetị na OST fọdụ ihe atụ ndị a na-ahụkarị bụ:
1. Na Outlook, ịtọbeghị akaụntụ email maka ịnweta igbe akwụkwọ ozi Exchange n'ụzọ ziri ezi.
2. Na Outlook, ihichapụ akaụntụ email maka igbe ozi Exchange.
3. Na nkesa Exchange, igbe ozi Exchange, ma ọ bụ akaụntụ email maka igbe ozi Exchange nwere nkwarụ ma ọ bụ ehichapụ.
4. Enwere nsogbu nkwukọrịta n’etiti Outlook na sava Exchange.
5. You na-adịghị Exchange akaụntụ email na niile. Na akaụntụ email gị dabere na POP3, IMAP, HTTP ma ọ bụ sava ozi na-abụghị Exchange Server. Ma, ị setịpụrụ akaụntụ email gị dị ka Exchange dabeere na ndudue.
Iji dozie njehie a ma gbochie ọnwụ data, ị kwesịrị ime dị ka ndị a:
chọta OST faịlụ na-akpata njehie. Dabere na ozi dị na njehie ozi, ị nwere ike mfe ịchọta faịlụ ahụ. I nwekwara ike iji ya search rụọ ọrụ na Windows iji chọọ maka OST faịlụ.
Napụta data na-anọghị n'ịntanetị na OST faịlụ. The Exchange OST faịlụ ahụ nwere data na-anọghị n'ịntanetị, gụnyere ozi ozi na ihe ndị ọzọ niile, na igbe ozi Exchange gị, nke dị gị mkpa. Iji zọpụta data ndị a, ị ga- ojiji DataNumen Exchange Recovery i scanomi ihe OST faịlụ, weghachite data dị na ya, wee chekwaa ha na faịlụ Outlook PST nke mere na ị nwere ike ịnweta niile ozi na ihe na Outlook mfe na rụọ ọrụ nke ọma.
Ndabere na OST faịlụ. Maka nchekwa, ị ga-akwado ya nke ọma.
Kpọgharia aha ma ọ bụ hichapụ ihe mbụ OST faịlụ na-akpata nsogbu.
Idozi njehie ahụ.
Ọ bụrụ na igbe igbe ozi Exchange na akaụntụ email gị ka dị, mgbe ahụ ị kwesịrị ijide n'aka na ntọala akaụntụ email ahụ na Outlook ziri ezi, na Outlook nwere ike ijikọ na sava Exchange gị n'ụzọ ziri ezi. Mgbe ahụ ị nwere ike start Outlook na zipu / nata ozi ịntanetị gị na igbe ozi Exchange, nke ga-eme Outlook iji mepụta ọhụụ OST faịlụ na akpaghị aka ma mekọrịta data ya na igbe ozi Exchange .Ọ bụrụ na usoro a anaghị arụ ọrụ, biko soro ntuziaka ndị dị na 5.2.
5.2. Ọ bụrụ na igbe akwụkwọ ozi Exchange gị ma ọ bụ akaụntụ email anaghị adị ọzọ, ma ọ bụ na ịnweghị akaụntụ email Exchange ma ọlị, ma ọ bụ ntuziaka dị na 5.1 anaghị arụ ọrụ, mgbe ahụ profaịlụ ozi ugbu a ezighi ezi, ị kwesịrị ihichapụ ya mepụta nke ọhụrụ, dị ka ndị a:
5.2.1 Pịa Start, wee pịa Ogwe njikwa.
5.2.2 Pịa Gaa na Nlele Omuma ọ bụrụ na ị na-eji Windows XP ma ọ bụ nsụgharị dị elu.
5.2.3 Pịa ugboro abụọ mail.
5.2.4 Na Mbido Ozi igbe, pịa Gosi profaịlụ.
5.2.5 Họrọ otu profaịlụ na-ezighi ezi na listi ma pịa wepụ iwepu ya.
5.2.6 Tinyegharịa 5.2.5 ruo mgbe ewepụrụ profaịlụ niile na-ezighi ezi.
5.2.7 Pịa tinye imepụta profaịlụ ohuru ma tinye akaụntụ email dika ụdị ha si dị.
5.2.8 Start Outlook, ị ga - ahụta nsogbu ga - apụ n'anya.